Microsoft inotumira kukoka kuti vaedze Cortana paIOS | IPhone nhau
Iyo yekutanga vhezheni yemuvengi waSiri weIOS, Cortana yeIOS iri kutotumirwa mune yako kutanga beta kune vamwe vashandisi kuyedza Microsoft mubatsiri pane yavo iPhone, iPod kana iPad. Mavhiki mashoma apfuura hwindo rakavhurwa kusaina sa betatester kuyedza Cortana, hwindo-rakapfupika-pfupi risingatibvumidze kutora chikamu muchirongwa chekuyedza chevaroyi. Ino yave nguva yekuyedza uye Microsoft iri kutumira iyo kukoka vamwe vashandisi kuitira kuti vagone kurodha pasi nekuriisa. Iyo nguva ichatora yekukoka kusvika ingangoenderana neodha yekunyoresa.
Kuti uedze mabheji ekushandisa kuruzhinji, unofanirwa kushandisa chikuva cheApple chekuyedza Kwayedza. Parizvino, vanhu zviuru zviviri chete ndivo vanogona kuyedza iyo imwechete app, saka kunyoreswa kunofanirwa kunge kwaive kurotari. Zvakare, izvi zvishandiso zvinogona kungoedzwa kwemazuva makumi matanhatu. Ndinovimba, mumwedzi miviri tichakwanisa kuyedza Cortana kune vese vashandisi, kunyangwe Microsoft isati yazivisa chero zuva repamutemo parizvino.
Zviri pachena kuti Cortana haazove nekubatanidzwa kwakafanana naSiri muIOS 9, asi avo vakayedza vanoti unogona kutsvaga internet, nyora maemail, mameseji uye zviyeuchidzo uchishandisa mirairo yezwi. Zvakare ane mazano anoshanda Asi, sekutaura kwandataura, hazviite kuti iwe utore ruzivo rwakawanda paIOS sezvazvichaita pane mamwe masisitimu anoshanda, kunyanya kana tichifunga nezvechinzvimbo chakasimba cheApple maererano nekuvanzika kwevatengi vayo, chimwe chinhu chakangwara njere. nyanzvi vanovimbisa kuti izvi zvinononoka kuvandudza kweanenge ari mubatsiri weavo veCupertino.
Microsoft iri kuyedzawo Cortana paApple, iyo inoratidza kufarira kwayo kusvika pazvinhu zvese zvinogoneka nenzira yakafanana nemabatiro avanoita neBing, injini yekutsvaga yekambani ikozvino inotungamirwa naSatya Nadella.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Microsoft inotumira kukoka kwekutanga kuti vaedze Cortana paIOS
Tora uye Put.io timu kumusoro kuunza mafashama kuApple TV